Sida loo Beddelaan VLC Faylal ay si MP4 Files
Sida dadka intooda badan, oo aad jeceshahay waxaa laga yaabaa in la isticmaalayo VLC sida warbaahinta ciyaaryahanka, ciyaaryahanka lacag la'aan ah ka ciyaari kara qaabab audio & video kala duwan, iyo sidoo kale DVDs iwm Oo ah lover VLC, waxaa dhici karta inaad ku kaydiso laga yaabaa in badan oo filimada maktabadda VLC ah. Waa hagaag, doonayaa si loogu badalo, kuwaas oo videos ama filimada ee VLC in qaab MP4 for loo maqli ku saabsan telefoonka mobile smart ama ugu aaladaha kale ee la qaadi karo sida PSP iwm? Haddii ay sidaas tahay, waxaad baran kartaa sida loo badalo VLC videos in videos MP4 si fudud oo dhaqso ku cad qodobkan.
Qaybta 1aad: Sida loo Beddelaan VLC Faylal ay si MP4 la VLC
Qeybta 2: hab sahlan si loogu badalo VLC Faylal ay si MP4
Talaabada 1: Import Video inay VLC
First of dhan, waxaan u baahan nahay in aan VLC Media Player, oo ka dib markii furitaanka, waa in aan guji ee bar sare navigation, oo guji " Media "dhibic, taas oo furi doonaa yar DropBox ah.
In WordPress waa in aan guji " Files Multiple Open ... "tab, (ama isticmaal hotkey ah Ctrl + wareejin + O ) oo sug ilaa menu muuqan doonaa boggayaga shaashadda.
Talaabada 2: Tag menu loogu badalo ka
In ka menu, kaas oo u muuqday, guji " Add "button, iyo dooran file aad u baahan tahay si loogu badalo. Taas ka dib waa in aad riix arrow, kaas oo ku sugnaa meel u dhow " Play "button. Gujinaya arrow this furi doonaa WordPress ah, taas oo ah waa in aan dooran link ah, loo yaqaan " Beddelaan ", ama isticmaal uun a hotkeys Alt + O .
Talaabada 3: Dooro goobaha sida aad jeceshahay
In ka menu, kaas oo u muuqday, aad arki doonaa waxyaalahan oo kale:
Jidka si ay isha ugu video, nooca file this, iyo goobta, taas oo aan u baahan in la dhiso.
First of dhan, waxaan u baahan nahay si ay u maareeyaan naga profiles, iyo dooran taas oo ay naga mid ku haboon ugu fiican. In DropBox ka mid arki kartaa profiles aad u badan - u iDevices, telefishin, Androids, iwm, laakiin waxaan u baahan nahay in la doorto mid ka mid ah oo keliya - waxaa loo yaqaan " Audio - MP3 (MP4) ". Waxaa ku qoran shaashada ah:
Sida ogaaday aad waxaa jira qaar ka mid ah badhamada midigta ee WordPress, waxaa aan doortay nooca profile. Badhamada Kuwan waxaa loo isticmaalaa:
Press reserved nooca video ama audio codecs, kuwaas oo aad u baahan tahay si sax ah loogu video ama audio ah tahay in aad isku dayaya si loogu badalo. By jidkii, waxaa jira qaar ka mid ah hawlaha dheeraad ah oo weyn iyo kartida aad u baadhaan.
Delete ku profile kaas oo la doortay ee WordPress ah.
Mid ka mid ah waxaa loo isticmaalaa in la abuuro nooc cusub oo ah profile la maareeyo oo dhan codecs audio iyo video faylka aad u baahan tahay si loogu badalo.
Talaabada 4: Ku bilow hawlaha qaab beddelidda
Waxaad u baahan tahay inaad doorato file Ahaado, halkaas oo dhamaan macluumaadka la ka kooban doonaa. In aannu kiiska, waxaan isticmaali kartaa " Browse "button, u yimid inuu Desktop ah, qor magaca ah faylka, ha noqoto" container.mp4 ", oo taas ka dib, web guji waa ku" Start "button, iyo habka diinta uu bilaabi doono.
Waqtiga lagu qiyaasay oo ka mid ah diinta ku xiran xoogga aad PC, iyo nooca codec ee aad isticmaalayso si loogu badalo.
Marka la eego VLC video files yihiin qaabab kala duwan, waxaad u baahan tahay a video Converter awood badan tahay caawimada. Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) waa inay awoodaan inay taageeraan kala duwan oo qaabab audio & video, xitaa DVD files. In flash ah, taas VLC weyn in Converter MP4 ka dhigi kartaa in aad ku raaxaysato oo dhan ee aad VLC videos on your media player MP4 la daawado ee saamayn ugu fiican. Howlgalka waa mid aad u fudud maydhan biyaha, iyo geeddi-socodka waa mid aad u degdeg ah. Just raac tilmaan-hoose.
Tallaabada 1. files Import VLC in VLC in ay MP4 video Converter u diinta
Dul gal ah in ka kooban yahay ee xaafaddaada VLC video files. Ka dibna dooro faylasha aad rabto, ee soo socda, si fudud kuwaa oo si Murayaad this app ee. Ama waxaad riixi kartaa ka button daaqadan xitaa your computer iyo dajiyaan faylasha VLC in barnaamijkan loogu diinta video.
Fiiro Gaar ah: Waxa ugu wada hooseeya ee suuqa, waxaa jira file Jid iyo ikhtiyaarka Folder Open. Files wax soo saarka waxa lagu kaydin doonaa gal, oo si dhakhso ah loo heli karaa haddii aad guji Folder Open.
Tallaabada 2. Dooro MP4 sida qaab wax soo saarka
Waxaad hayso laba dariiq oo kala liiska qaabka wax soo saarka. Mid ka mid ah waa in la garaaco icon qaab image ku Murayaad Qaabka Output. Markaas oo kale waa in guji liiska hoos-hoos qaabka at meel ka mid ah. Marka aad u samayn, kaliya ku dhufatey "Qaabka" tab, ka dibna dooro "MP4" ka "Video" category.
Tallaabada 3. Beddelaan VLC in MP4
Tallaabada ugu dambeeya waa in la riixi "Beddelaan" doorasho ee geeska midig hoose oo ka mid ah barnaamijka 's interface ugu weyn. Hadda, app this bilaabi doonaa si loogu badalo VLC video files si files MP4. Oo weliba diinta video la soo dhameyn doono daqiiqadii ah. Marka sameeyay, kaliya ay tagaan folder wax soo saarka si aad u ogaato faylasha MP4 gediyay loo isticmaali.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad ka ciyaari files wax soo saarka qalabka qaar ka mid ah, hal talaabo dheeraad ah waa in lagu wareejiyo files si ay qalabka via cable.
VLC DVD: Sida loo Guba VLC Faylal ay si DVD (Windows 10 ka mid ah)
Sida loo beddel Volume in Media Files
> Resource > Video > Sida loo Beddelaan VLC Faylal ay si MP4 Files